Minisiteran'ny aterineto - CB forgotten Login
Very ny anaranao na ny teninao?
Raha ianao very ny anaran'ny mpampiasa anao, azafady azafady ny adiresy E-mail, ary tsindrio ny bokotra Send Username, ary ny anaran'ny mpampiasa anao dia alefa amin'ny adiresy mailakao.
Raha ianao Hadinoina ny anarana nomena anao sy ny tenimiafinao, azafady azafady aloha ny anarana nomena, avy eo ny tenimiafina. Mba hahasitrana ny mpampiasa anao, azafady azafady ny adiresy e-mailo, mamela ny anaran'ny mpampiasa foana, ary tsindrio ny Send button, ary ny anaran'ny mpampiasa anao dia alefa amin'ny adiresy mailakao. Avy eo dia afaka mampiasa io endrika mitovy io ianao mba hahazoana ny tenimiafinao.
Raha ianao very ny tenimiafinao fa fantaro ny anaran'ny mpampiasa anao, azafady azafady ny anaranao sy ny adiresy e-mailo, tsindrio ny bokotra Send Password, ary hahazo tenimiafina vaovao ianao amin'ny fotoana fohy. Ampiasao ity tenimiafina vaovao ity hiditra ao amin'ilay tranonkala.